Ciidamo hubeysan oo kala dhex-galay Maleeshiyaad dagaalamay | XORRIYA NEWS
Home Wararka Ciidamo hubeysan oo kala dhex-galay Maleeshiyaad dagaalamay
Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalka.
Ciidamo ka tirsan xoogga Dalka Qaybaha 21-aad iyo 27-aad ayaa gaaray deegaano duleedka ka ah Degmada Maxaas ee Gobolka Hiiraan oo shalay halkaas uu dagaal xoogan ku dhexmaray laba Maleeshiyo beeleed oo halkaas wada-dega.
Ciidamadan oo fulinaya Amarka Taliyaha Xoogga Gen. Odawaa Yuusuf Raage ayaa tegay deegaanada xagar iyo laan-cadaad ee Degmada Maxaas, iyagoona dhexgalay Maleeshiyaadka ku dagaalamay halkaas.
Ciidanka oo qayb ay ka yihiin kuwa nabadsugida iyo sirdoonka Qaranka ee NISA waxaa hugaaminayo Sareeye Guuto Mascuud Maxamed Warsame Taliyaha Guutada 15-aad ee Qaybta 21-aad, waxaana la filayaan in Saraakiisha Ciidanka ay la kulmaan Odayaasha labada dhinac.
Sidoo kale Saraakiisha ayaa Odayaasha kala hadli doona sidii loo soo afjari lahaa Colaada kasoo cusboonaatay deegaanada xagar iyo laan-cadaad iyo sidii loo kala qaadi lahaa Maleeshiyaadka oo weli is hor-fadhiya, isla markaana wax kasta oo jira lagu dhameeyo wada-hadal.
Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanada lagu dagaalamay, kaasi oo soo gaaray labada dhinac, waxaana saakay xaalada deegaanadaas ay tahay mid degan, ayna jirin rasaas la maqlayo.